Iimpawu ezingama-36 zasimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuzisele Ukukhetha icon ngokukhululekileyo egxile kwishishini lakho kunye namaphepha akho ewebhu, namhlanje besifuna ukuzisa Ukukhetha icon iindawo ezingakumbi eziqhelekileyo. Sonke siyazi ukuba xa uzama ukukhangela ii icon kwi-intanethi kunzima, kwaye ngakumbi ukuba sifuna ii-icon zasimahla ezinomgangatho olungileyo, kule post sikuzisa uthotho lweempawu ezenziwe UElena de PomarEzi mpawu azikho simahla kwaye zinokuguquguquka okuninzi, kodwa zikwanomgangatho ophezulu osivumela ukuba sizisebenzise kungekuphela nje ngobuqu, kodwa kwanokusetyenziselwa ubuchwephesha ngakumbi.
Iintlobo ngeentlobo zeempawu zayo ezisusela kwiimpawu ezikwimimandla esezulwini, ukuya kwizithambiso zezityalo zasekuqaleni, zisivumela ukuba sizisebenzise zombini kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi, ngothotho lohlengahlengiso kunye nokuhlelwa kwazo singenza izigidi ngale mifanekiso yehlabathi elitsha. , ukongeza kuncedo lwabo lokuhlela ezi icon zisivumela ukuba sizisebenzise kwimisebenzi eyahlukeneyo, sizenze zilungele ngokugqibeleleyo isabelo ngasinye.
Ngaphandle kwazo zonke ezi zinto zintle, ii icon ziye zaphuhliswa kumgca wokuyila ofanayo, kugxilwe kakhulu kwijometri elula necacileyo, yiyo loo nto ezi icon iphakanyiswe kwisitayile sejiyometri, esetyenziswa ngokubanzi namhlanje, yenza uyilo lwethu luncanyathiselwe iindlela ezintsha zoyilo.
Ukuba ziyonwabisa kwaye zinamandla ezi icon ziyasivumela ukuba sizisebenzise ngobuninzi beeprojekthi, phakathi kwazo sinakho yenza ipateni ngendlela elula kakhulu, njengoko besikufundisile kwiintsuku ezidlulileyo. Okanye udibanise ngokuthe ngqo nabo benza umzekeliso wendawo kunye nabo.
Khuphela ezi icon zendawo:
Iimpawu onokuthi uzenze khuphela apha, iphepha le-Behance lomyili wayo, kufanelekile ukuba ujonge umsebenzi wabo kwaye ushiye okungaqhelekanga kwiiprojekthi zabo (kwi-Behance awudingi bhaliso ukuze unike into enjalo).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu ezingama-36 zasimahla